UDavid Icke eLondon yangempela yevidiyo: Ngaba i-Icke yeyokwenyani okanye yeyokwenyani okanye ngaba inyani idityaniswe nomgibe we-booby? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	8 Aprili 2020	• 33 Comments
Kwiintsuku zamva nje bendinemibuzo emininzi malunga noDavid Icke kunye nodliwanondlebe wakhe waseLondon, kuba I-BBC ibikhuthaze iYouTube ukuba isuse udliwanondlebe, apho YouTube yakwenza oku. Le vidiyo kuthiwa yatsala izigidi zababukeli kwisithuba seeyure ezimbalwa, kodwa yahlolwa. Kuba uDavid Icke ngoyena mntu ucinga kakhulu emhlabeni odumileyo, ndinemibuzo emininzi malunga nokuba ulungile kwinto ayithethayo. Kungenxa yoko le nto ndaye ndagqiba ekubeni ndinikezele inqaku kuyo.
Impendulo yam icacile: UDavid Icke uchanekile kuyo yonke into ayithethayo, kodwa ngokuqinisekileyo kukho ibhombu eyakhelwe kwindawo ephantsi kabini yokuloba inqanawa.
Makhe ndicacise ukuba ngononophelo apha ngezantsi. Kodwa ukuba wenza olwakho uluvo, ndiza kunika umbono wam ngalo mbandela.
Nokuba i-Icke, ngesazela, ibeke ibhombu kwindawo yesibini ezantsi, anditsho. Emva kwayo yonke loo nto, ubonakala enyanisekile kwaye enomdla wokuvusa abantu. Nangona kunjalo, sikwabonakala ngathi siyayibona loo ntando inje ngabantu abanjengoAlex Jones okanye uRobert Jensen, kuphela ngoDavid Icke ubukeka buyinyani. Akukho mkhondo wokubambisa oza kufunyanwa.
Ndikhe ndathetha nge-pawns yokhuseleko kwixa elidlulileyo. Isimo se-pawn kukuba kukho umntu olawulayo. Oku kunokwenziwa kwinqanaba lokungazi. Kuba bendibhala ngaphezulu kweminyaka esixhenxe, ndiye ndafumanisa ukuba ukondliwe ulwazi oluninzi kwaye uninzi olo lwazi luthunyelwe kuwe ngabafundi okanye (ngamazwi akho) abalandeli abathembekileyo. Kananjalo ngamanye amaxesha ufumana izinto ebantwini abathi bafunda eyunivesithi; ugqirha, unjingalwazi okanye unjingalwazi. Xa oku kusenzeka kum, ndihlala ndicinga ngeentsuku zam zokuqala xa ndafumana uxwebhu olusemthethweni kumapolisa kwityala lika-Anass Aouragh. Olu xwebhu lwajika lwaba ngumgibe ngabom: lobuxoki.
Ngamafutshane: Kunzima kakhulu ukwazi ixesha langoku 'lomdlalo ulungisiwe' nokuba ngaba ulwazi oluvele kwimithombo eyiyo aluqhutywa ngentsimi efanayo eyakha iyelenqe.
I-pawns zokhuseleko zivumelekile ukuba zivakalise iinyani kwaye zifumane abalandeli abaninzi. Ngale nto bafumana ixesha elininzi lokuthetha kunye nengqwalaselo evela kumajelo eendaba (amabi) kunye nolunye uhlobo lweendaba (ezakhayo), kuba into oyinikelayo inokukhula. Sabona indlela u-Ace Baker akwazi ngayo ukuheha 'intshukumo yenyaniso' emva ko-911 ngokufumana ukuvezwa kweendaba ezininzi, emva koko wazithathela ubomi bakhe kumdlalo osasaza unomathotholo; Kuphila kwakhona kwakhona kwakamsinya emva koko (mamela apha).
I-Luciferian i-666 yezandla ze-Pamela kunye no-David Icke, umthombo: whale.to
UDavid Icke ubengumntu oqeqeshiweyo kumabonakude okhutheleyo kwezopolitiko. Umtshato wakhe wesibini yayinguPamela Leigh Richards. Ngoku awunakunxibelelanisa umntu kunye ne-ex yakhe, kuba mntu ngamnye uhamba ngendlela yakhe kwaye ngamanye amaxesha unokuba nesiphoso esibi komnye umntu okanye ube nembono ezichaseneyo, kodwa uPamela ngokucacileyo ngumabhalist ovezwe ngokucacileyo obonisa uphawu lwaseLuciferian kwi kwiwebhusayithi yakhe ime.
U-Icke ngokwakhe ubonakalisa kwiincwadi ezininzi ukuba umamela 'amagunya aphezulu' kwaye la magunya afanayo aqhubeka nokumdibanisa nomfazi wakhe owayesakuba ngumfazi uPamela (ngoAlister Crowley, uAlice Bailey). Oku ngaphandle kwento yokuba i-Icke ikwabhengeza imicimbi emnyama ejikeleze iCrowley neBaily. Nalu uluhlu lwemicimbi ebalulekileyo malunga ne-Icke:
Unxibelelwano lwakhe no-Alice Bailey (umsunguli we-ajenda ye-UN Luciferian 'elungileyo')
Imijelo yakhe ye-Bailey ekhethekileyo "ye-Mascended Masters" kunye nokukhankanywa ukuba ezi zizikhokelo zobomi bakhe.
Ithiyori yakhe yenyanga ivela kuAlice Bailey
Isimilo semfundiso yeKabbalah, inkolo entsha yeLuciferiya ukuba ifakwe phantsi komyalelo wehlabathi elitsha, kukuba abantu kufuneka bavuke. Kufuneka sitywinwe ngomgangatho omkhulu ngobubi nokulungileyo emhlabeni (jonga ngcaciso). Kungenxa yoko i-pedophilia ngequbuliso iphantsi kwendawo yokubekwa, umzekelo. Bonke ububi emhlabeni kufuneka bume. Oko kubonakala kungumsebenzi kaDavid. Yindlela yeendlela ezimbini eziya kubunye beLuciferian (ekwabizwa ngokuba "yindlela yokukhanya"). Siyayamkela le nto iphambili phakathi kweenkolo eziphambili zehlabathi, kwezopolitiko, kwiinkolo (uthixo ngokuchaseneyo noSathana) nakumajelo eendaba ngokuchaseneyo nolunye uhlobo losasazo.
UDavid Icke ufezekisa indima yokuveza ububi. Le yenye yeendlela eziya kufikelela kwinjongo yeKabbalistic. Owona njongo wokugqibela ufezekiswa ngokuvula ukwazi kwethu ukuba umbono uphila kwimo yokwenyani. Ke ingakanani i-Icke ngokwakhe ayinika ku-Elon Musk malunga ne-ajenda yakhe ephindwe kabini (isilumkiso malunga ne-AI, ngelixa uMusk efuna ukuxhoma ingqondo kwilifu kwaye axhome i-satellite ye-5G esibhakabhakeni), oku kubonakala ngathi kuyenzeka kuye. Kuba xa uxela nje ukuba siphila kwimo yokwenyani kwaye awuchazi ukuba kukho intsingiselo yentsholongwane kaLuciferian, wazisa abantu kwezo ngqondo zibubuxoki kwaye wazisa abantu kuloo fusion neLuciferian AI ( Ndiyicacisa ukuba kwincwadi yam).
Ke andinakutsho ukuba i-Icke iyasazi okanye "ilawulwa" ukhuseleko lwe-net pawn, kodwa ndicinga ukuba siyakhohliswa ukudibanisa intsholongwane ye-corona kwii-5G masts. Ngaphandle kombuzo wokuba ngubani na ocwangcisa ezo maski ze-5G ngomlilo nokuba ngaba ayizizo iiarhente zikarhulumente kuphela, akukho bungqina bunzima bokuba i-5G ngenene iyakuthintela ukuthathwa kweoksijini emiphungeni, okanye ubungqina obunzima bokuthi i-5G ivuselela ukuveliswa kweesiphumo ezivela kwizisele. . Ngokwe-Icke, ezi ziphumo zine-anatomy efanayo ne-coronavirus. Kungaba njalo, kodwa ndicinga ukuba le yibhombu eyakhelwe ngaphakathi kumazantsi amabini.
Ngaba akukho mngcipheko kwezo masts ze-5G? Ewe, ndiza kuyicacisa eli nqaku. I-PsyOp inokuba yi-PsyOp 'umkhanyo' ngaphandle kwesidingo sokwenza (ubuxoki?) Dibanisa ne-5G (i-oxygen uptake blockage or exosomes).
Ngaphambili Ndatsho sele indlela uphawu 'oluchanekileyo' olwakhiwe ngayo ngokudibanisa ii -thiyori zethamsanqa kunye nobuso obubalaseleyo kwimithombo yeendaba ehlukileyo. Abantu abanjengoAlex Jones, uRobert Jensen, uDavid Icke, kunye neewebhusayithi ezininzi zidibanisa noDonald Trump, uBoris Johnsen, uJair Bolsonaro, uTierry Baudet, nabanye abapolitiki abanamaphiko. Nge-disinfo eyakhelwe-ngaphakathi, exutywe nenyaniso kunye nokwakhiwa kwegama 'lasekunene', kubandakanya nelokwexeshana Ukunyuka kwamandla kwezobupolitika ezinamaphepha asekhohlo, kungekudala uya kukwazi ukuvusa loo nto kwindawo enye uze ke ulahle umntwana ngamanzi okuhlamba.
Ke ngoku ungabeka umva kuko konke ukugxekwa kokusekwa kwezopolitiko zakudala kunye namajelo osasazo eendaba kwindawo enye, ukuba ungalichonga eli qela njengabaphembeleli. Isicwangciso esicacileyo kubonakala ukuba kulapho i-coronavirus izakuthengiswa khona ngemithombo yeendaba kunye nezopolitiko njengento engathathelwa ingqalelo yi 'lungelo' kwaye enye into enokuthi ibonelele ubungqina obujongela phantsi i-disinfo eyakhelwe-ngaphakathi.
Ke ngoku uDavid ethetha inyani, ndicinga ukuba yinxalenye yesicwangciso sobuchule. Ngokombono wam, u-Icke uthetha phantse yonke inyaniso enzima. Ndivumelana ngokupheleleyo ne-99% yento ayithethayo. Utyhila ububi kunye namanqaku okuqonda. Nangona kunjalo, kukho ibhombu kwindawo esezantsi kabini.
Into endiyikhumbulayo nebali lakhe sisilumkiso senkqubo yentsholongwane kaLuciferian. Ewe, ukuba siyayiqonda intsingiselo yaso, asizukuhlala kule nkqubo yentsholongwane kaLuciferi kwaye sifumanise ukuba thina singabadali bendalo, apho indalo ikhoyo ngoku. Sikuyo inkqubo yeentsholongwane; Inkqubo yentsholongwane eyikopi esemva nje yendalo. Ndiyicacisa ngokuthe gca nangakumbi ngakumbi kwincwadi yam nale amanqaku ongezelelweyo. Zigwebe ngokwakho.
(Ividiyo isusiwe? Jonga apha: bitchute.com)
UDavid Icke eLondon yangempela nge-6 ka-Epreli 2020 (EFUMANEKILE) ku JMedia on bedlala.
Uluhlu lwekhonkco lweBon: flywithmeproductions.com
Isicwangciso sokugonyela esinyanzelekileyo seNetherlands ngoDisemba ka-2019 sizisiwe
tags: kwavalwa, i-theory, david, ukuphuma, eziziimbalasane, ifilimu, ivinjiwe, ihlawulwe, ncokola, Icke, udliwanondlebe, London, psyop, yenene, siskemu, tv, zisuswe, isusiwe, yokuzonwabisa, youtube
8 Aprili 2020 kwi-11: 32
Abo bebehamba kule nyana iminyaka. Isekethe (iminyaka engama-25 okanye ngaphezulu) bayazi ukuba i-Icke ayithembeki nokuba ivela kumzi-mveliso we-BBC (Tavistock). Udliwanondlebe aliqela uDarryl Bradford Smith no-Eustace Mullins baveza i-Icke. Phantse lonke udliwanondlebe lukaDarryl Bradford Smith lususiwe kwi-YT, kwaye i-Icke isebenzisa ithiyori kaSabbateans Frankists ekuye kwaxoxwa ngayo ngokubanzi kwisitishi sikaSmith.
Ulwazi olusebenziswa yi-Icke luvela kwabanye abaphandi abaziwayo angazange yena, kodwa engazange abize ngegama, ubiza umsebenzi wokhuseleko. I-Icke inokuthelekiswa noJones xa isiza entloko, bawa kakhulu, ngakumbi kwi-BBC.
8 Aprili 2020 kwi-12: 02
Kolu dliwanondlebe, akahlaseli i-BBC kube kanye malunga nokuxelwa, umzekelo, ukwakha i-7 ngexesha lokusebenza kwe-9/11. Kwaye ke mhlekazi ucinga ukuba usapho lwasebritane lwasendlwini luyinto yokutshintsha, luhleko!
8 Aprili 2020 kwi-12: 33
Inye kuphela into elawula i-pawns ephikisayo ayikhe ithethe malunga kakhulu: malunga nembono 'yenkcaso elawulwayo'.
Awuke ubabone besithi kukho wonke umkhosi wamajelo asekuhlaleni we-Inoffizieller Mitarbeiter (amalungu e-IMB… ababekade bebizwa ngokuba ngamalungu eNSB). Umkhosi apho esinye isiqingatha sikhusela ibali eliphambili kwaye elinye isiqingatha likhusela i-pawns kunye namabali alawulwayo.
8 Aprili 2020 kwi-12: 43
Ngokuchanekileyo, kwalapha kule ndawo ndibona iiprosesa ezintsha ziphuma. Isicwangciso sokuqonda sokubakhulula?
8 Aprili 2020 kwi-12: 45
Ewe, ngamanye amaxesha kuya kufuneka uyibonise
8 Aprili 2020 kwi-16: 31
Ngokuqikelela oku, i-cke ngoku iqeshiselwe ubalo-mali njengoko iijones zisetyenziselwe ukucalu-calula okukhulu kwi-youtube.
I-Coronavirus: I-YouTube iqinisa imithetho emva kodliwanondlebe no-David Icke 5G
10 Aprili 2020 kwi-09: 03
Njenge 99,9% yeqela eliphikisayo, i-Icke ikhe yajongwa, kuba umhlobo uJensen ubathumele ngokucacileyo abalandeli bakhe kunye nabaphulaphuli kwividiyo ye-Icke kwiphepha lakhe lokugqibela aze ayithumela kwiwebhusayithi yakhe (podcast 09-04-2020 jensen )
10 Aprili 2020 kwi-09: 09
Awuyi kufumana umdla ukubonwa. Uninzi lwabantu lukhombe i-Icke kwindawo yam kwiminyaka eyi-7,5 edlulileyo. Baxela oko kum. Kwaye ngaphambi kokuba ndiqonde ukuba wayengumntu ochasayo ochasayo. Ngapha koko ... bendinayo ephezulu.
I-Icke ihlala indivale, ngelixa ndinabalandeli abaninzi kune-Ninefornews, umzekelo. Kwaye okwangoku uhlala ekhangela ezo webhusayithi kwaye enze udliwanondlebe nazo, osoloko wazi ukuba zilawulwa. Ngamafutshane: abafuni ukukopela.
10 Aprili 2020 kwi-09: 28
Into yokuba ividiyo ye-Icke iphoselwe ku-youtube (kwaye loo nto inikiwe esidlangalaleni) kusenokwenzeka ukuba yenzelwe nje ukwenza i-Icke ijongeke ibe inokuthenjwa ngakumbi kwaye inike nabantu abangakumbi abafuna ukuvusa umbono wokuba ngenene yinkcaso engalawulekiyo. Inyani yokuba uninzi lwamawebhusayithi alawulwa ngenye indawo kunye nezinye iisayithi zemithombo yezentlalo kuthiwa ziyamnceda (ngokuqinisekileyo zonke ziyavumelana kwaye zilungelelaniswe kwangaphambili) ngokubeka ividiyo kwiqonga labo ikwanika ezi ndawo zongezelelekileyo zokunyusa ukuthembeka kuba abantu bacinga, ukuba le ndawo inenye iyaliwe ividiyo ye-Icke emva koko kufuneka babe ngokuqinisekileyo bayayichasa.
10 Aprili 2020 kwi-09: 31
Kananjalo kufuneka bancedise ekutyhaleni ijelo leLondon lokwenyani ... lwentengiso egudileyo ye-NLP
Ngapha koko, abantu bayayiva loo nto.
Ixesha aliyi kuxela: ixesha liya kufunda ngokuqinisekileyo.
10 Aprili 2020 kwi-10: 47
Yup zonke "Ukubuyela kwengqondo kwengqondo"
8 Aprili 2020 kwi-17: 53
Ukuhleka kuvuthuzwa ukusuka ku-1.33.55, salawula inkcaso hahahahahaha ke mna ndandikade ndiku-tel aviv.
Jonga ubuso ubuxoki buchaphazela nyani lol
8 Aprili 2020 kwi-20: 07
Into endiyikhumbulayo kudliwanondlebe yiplanethi enguNiburu. Makhe nditsho kuqala ukuba andikholelwa kumaqabane akwiplanethi X! Ndiyakholelwa kutshintsho lwephuli kwiplanethi eya kubuyisela izinto kwakhona ngaxeshanye. Ngaba ngulo msindisi oweza kusisindisa kumlilo wethekhnoloji?
Ke ngoko, kunomdla ukuba uthi icebo kukutshintsha ubumbini lube nobunye. Ngaba iyakufika loo nto okanye ngaba yonke itekhnoloji icinyiwe ngumazibuthe?
Amashishini nabantu abakhethileyo bangasinda njani kumandla abanye abantu ngokukodwa? Ayizidingi iindawo eziphantsi zenkqubo yesibini?
Uphakamisa inqaku elibalulekileyo! Eli lizwe likopi kwaye ulishiya eli lizwe lingaphantsi kuya kufuneka ungoyiki konke konke ngasemva kwaye ungagcini ukujikeleza amakhonkco kube kanye ngeli xesha.
Enkosi uMartin kunye nabanye!
8 Aprili 2020 kwi-20: 28
Ukuqonda kanye oko ndithetha ukuba ndingayifunda. Ndingasifumana amanqaku afunekayo apha esizeni, kodwa loo nto ngumsebenzi omninzi kum ...
9 Aprili 2020 kwi-08: 07
Kwincwadi yakhe ethi "i-phantom self" I-Icke iyathetha ngentsholongwane ye-luciferian ethi izame ukufihla ukungazi kwethu.
9 Aprili 2020 kwi-11: 46
Kulungile, andiyifundanga loo ncwadi, ngenxa yoko andinakuyiqinisekisa le nto, kodwa ukuba kunjalo iyamangalisa! Mhlawumbi ufumene umbono kwindawo yam, kodwa ndinokuyithelekelela nje loo nto.
Emva koko uthetha inyani kuloo nto kwaye loo mbono inokuthi nayo ivuthululwe ngebhombu eyakhelwe-ngaphakathi kumazantsi amabini.
Ngaba unganikeza ubungqina bokuba uyayenza le nto? Into ihlala ithethwa apha ngenjongo yokujongela phantsi ibali lam. Ke nceda unikeze umfanekiso osencwadini njengobungqina.
9 Aprili 2020 kwi-21: 37
Okwangoku ndivile kwabaninzi ukuba i-Icke iyathetha kwincwadi yakhe i-Phantom Self ngenkqubo yentsholongwane kaLuciferian. Kutheni ungakhankanyi esi sihloko SIBALULEKILEYO kudliwanondlebe?
Kwimeko ethi: 'Ndikhankanya yonke into, kodwa andiyigxininisi kakhulu'?
9 Aprili 2020 kwi-08: 25
Kwaye kwakhona loo vidiyo kaDavid Lucifer Icke.
9 Aprili 2020 kwi-08: 44
Ifunyenwe apha ngaphandle kwemifanekiso, ukuba uyayifumana iluncedo.
Ukuyo yonke indawo, nangona kuyinxalenye yomdlalo.
Ewe, oko kufanele kusiqhubele phambili ukuya eLondon Real Channel
9 Aprili 2020 kwi-12: 07
Nditsho ukuba ndiye ndaphawula ukuba uBrian Rose uziphethe ngokwakhe rhoqo ngeRoyal Dutch Shell. Iofisi / isitudiyo sakhe sikufutshane, kodwa siyabetha.
ILondonreal ivumela abantu ukuba babalise ibali labo ngaphandle kokuwela kwisizathu, esikwinjongo yokubonelelwa kolwazi.
Kodwa iyadlala embindini we-BabyLONDON kungoko amathandabuzo asifikelayo. Andonwabanga nokuba wayekunye no-Alex Jones namhlanje.
Ewe, konke kulungiselelwe ukujikeleza apha emhlabeni ngonaphakade, ngelixa singaphakama sinyukele kwinqanaba eliphezulu.
Kodwa nokuba sisiphazamiso kunokuba yincwadi yezandla zethu.
Ewe singazitshintsha zonke izinto ngendlela elungileyo, kodwa kukho okungakumbi kuyo.
9 Aprili 2020 kwi-12: 08
Abaphangi bayazi ukuba abantu abaninzi baya kuvuka, ngoko ke musa ukubhukuda kumanatha abo okuloba aphikisayo! Bakunika nje i-shepert entsha. Yiba simahla kwaye uzimele! Awudingi nkokheli. Uyinkokeli. Ungumyili. Isimilo sale meko imbi kangaka yobusuku ilula: AYENzeki! Yithi HAYI! Yitsho SIMAHLA NENGQESHO
9 Aprili 2020 kwi-10: 33
Ugonyo lokuqala kwiTelevion ephilayo, awuyikholelwa, ewe uyakholelwa!
Iinkwenkwezi zehlabathi zihlala zimisela umzekelo
Bayimizekelo, njengoConchita Wurst njl ...
Iinkokeli zehlabathi ezisasaza ubuxoki (uhenyuzo)
U-Elvis wayengomnye wabo, ugonyo lokuqala lwePoliyo kwiTV
Awuvele nje ube yinkwenkwezi okanye i-asterisk, kuhlala kukho i-ajenda ekufuneka ihanjisiwe.
9 Aprili 2020 kwi-11: 09
"Ke andinakutsho ukuba i-Icke iyasazi okanye" ilawulwa "ngokhuseleko lomnatha, kodwa ndicinga ukuba sikhohlisiwe ukuba siqhagamshele intsholongwane ye-corona kwiimasti ezi-5G."
9 Aprili 2020 kwi-12: 44
Enye i-pawn elawulwayo esinyusa kuthi ukuba simise umlilo kwii-5G masts. Le ndoda ide ithi unxibe umnqwazi wealuminium. Yiyo kanye le mpambano umntu afuna ukuyibona. Ukucaca: i-aluminium foil ayinampembelelo kubuninzi bemiyalezo efanelekileyo kwaye ke iyinto yakho ehlekisayo.
Kwakhona: ii-pawns ezilawulwayo zithetha inyani eyi-99%, kodwa ikukhuthaze ukuba wenze izinto ongafanele ukuzenza okanye ezihlekisayo.
Into ekufuneka siyenzile: masithi HAYI.
Umyalezo wokugqibela ndifumene apha: "Landela iingcebiso zikarhulumente"
Ukuba bacebisile, unokukhetha. Ndiyalwazi ukhetho lwam. Imithetho ityikitywa sisithsaba kuba isithi uThixo ubanike amandla okulawula. Ukuba nabani na unokungqina kum ukuba uThixo ukho, ndiya kumamela.
9 Aprili 2020 kwi-15: 13
Amabango okungaqeshwa evekini e-US ayagxuma 6.6 izigidi, kuzisaba 3iveki zizonke ukuze engaphezulu kwe 1I-6 MILLION
Umyalezo ophambili: yiza nezintandathu ezi-3 kunye
10 Aprili 2020 kwi-19: 29
Le ndawo kuphela athetha ngayo malunga nokuba kunokwenzeka kunye ne-David Icke yinto yokhuseleko net kunye nokuchasa. Akukho ndawo yokufumana izimvo eziloluhlobo kwimithombo yeendaba "engalawulwa". Iyamangalisa indlela ababukeke ngayo abanye abantu apha abayigcine !!! Abarhanelwa abaqhelekileyo abayithandi ukuyibona kwaye bayiveze.
10 Aprili 2020 kwi-22: 11
Olunye ulwazi .. cofa nje 'ukubona okuninzi ..' ukuze ufunde isithuba sonke.
Zigwebe ngokwakho. Ndikhuphele isicatshulwa esingezantsi.
Bathe batyhutyha ngaphakathi kwiimvakalelo zentshabalalo kunye nesithokothoko, izilo ezikhulu kunye ne-boogeyman.
Ixesha nexesha umntu omhlophe ubanga umlo ngokuchasene nento eyoyika nokungaqondi.
Indoda emhlophe izamile ukwahlulahlula kwaye yoyise nantoni na ebona ukuba iyasongela ubukho bayo be-narcissistic.
Oku sikubiza le koloniyali kwaye ngokobuqu uDavid uyathuthuzela ngamandla e-winistador kum.
Iingcuka zizingelwe phantsi, zatshutshiswa kwaye zabulawa ngenxa yobuhlanya ngaphakathi kwengqondo yomntu.
UDavid Icke, obizwa ngokuba ngumfundisi ovusiweyo oshumayela malunga nothando kunye nokukhanya ngelixa egcwalisa i-mazingira ngamazwi amaninzi, uloyiko ngakumbi, imingxunya yomvundla ngakumbi yenza umlutha wokuvuselela inkanuko.
Indima yakhe yeTavistock kukuphambukisa ekuqondeni okufihlakeleyo kweNyaniso, ukondla ezinye iinkozo zokuxhotyiswa kunye nokukukhokelela kwi-Shadow Family's infreary nightmare.
UDavid ubanga ukuba isikhokelo sakhe yi-St.
RED I-FLAG 🚩
Kwaye yenza imisebenzi engcolileyo yezihlobo:
Iincwadi zikaDavid zangaphambili ("iVibrations yeNyaniso" kunye ne "Uthando oluTshintsha Yonke into") zazipapashwa yinkxaso-mali kaRupert Murdoch's "News Corporation".
"Inyaniso yeVibrations kaDavid" epapashwe ngu "I-Aquary Press / Thorsons", inxaso-mali yeHarperCollins, eneengxelo zikaRupert Murdoch 'weNdaba yeendaba'
I- “The Vibrations the Truth” yaphuma ngo-1991, ngalo nyaka mnye “ukuHlola ku-Thixo” 'ngutat'omkhulu wombutho omtsha' eBritani: Umnumzana George Trevelyan, oxhasa u-Icke "uphilise umhlaba", esithi " Indoda ebendilinde yena, iminyaka emininzi. Ngaba wayethetha ukuba uDavid 'wayengowesibini ukuza', ngokuhambelana namagqabaza kaDavid malunga nokuba ngunyana wobuThixo?
UTrevelyan wayeyitrasti yokuqala yeSisekoh. Ufundise ngembali kwisikolo saseGordonstoun, apho kwathunyelwa khona amalungu osapho lwasebritani, umzekelo uPrince. " -I-Tigger, i-alchemist engaziwayo
Kwaye makhe sijule ngokunzulu kolu hlaziyo:
Ngaba bakhona abantu abakhethe ubundlongondlongo kunye nomothuko njengemodyuli yabo yokusebenza?
Baninzi abantu abazihlukanisileyo ngokwendlela eyahlukeneyo kwaye ngoku bazingela amandla kuba bengakwazi ukuhlakulela ukukhanya okungaphakathi kubo.
Ngaba oko kuthetha ukuba ziintshaba zethu?
Thatha logi kwiliso lakho David kwaye uhlale kwisitulo sakho, wenze owona msebenzi wokwenyani, ndikubamba njengomntu obizwa ngokuba ngumfundisi wokomoya.
Wenza ngokungathandabuzekiyo kusapho lwethu kwaye uxhalatyiswa zizinto zakho ezigwenxa.
Masicinge ngommandla ophindaphindiweyo wobuchopho bethu.
Kukho inkolelo yokuba "into ephindaphindayo" yengqondo yethu yindoda embi, esisiseko sayo yonke loo mikhwa ingekho mgangathweni kunye neemvakalelo ezivelayo. Le ibeyinkcubeko ye-zeitgeist ngaphandle kweesayosistos esazi amashumi eminyaka ukuba le ngcingane yeTestune Brain ayisiyo umfanekiso opheleleyo.
I-basal ganglia, neqela leeuron embindini wengqondo yethu, ihlazisiwe kwaye igxekwa, abantu abaninzi benza amabango ukuba sisiphumo "sokuphindaphinda."
Abantu benza idemon kula ndawo ibalulekileyo kwingqondo yethu ngaphandle kokuqonda ukuba olo asilotshaba lwethu kwaye bayabandakanyeka ekusincedeni ukuzeyisa.
Mhlawumbi kufuneka siphinde siqwalasele iimbono zethu kunye nendlela esityhola ngayo ezinye izidalwa ngezinto ekufuneka sizithwale uxanduva ngazo.
Mhlawumbi ngokukhethekileyo kufuneka siyeke ukusebenzelana nemimoya yethu kwaye simamele oososayensi abaqeqeshelwa ubugqi kunye neearhente zobukrelekrele.
"Kutheni le nto ithi inkolelo kathathu yengqondo ikholelwa ngokubanzi, nkqu nangoochwephesha bengqondo, ngelixa i-neuroscience yokuziphendukela kwemvelo yashiya itiyori kumashumi eminyaka eyadlulayo (kwaye ayizange iyithathele ingqalelo kuqala)?
Ingxaki iqala, ewe, neMacLean. Ndicinga ukuba kufanelekile ngokucacileyo ukuba iMacLean yayifuna ukufumana into eyenza abantu (kunye nezilwanyana ezincelisayo ngokubanzi) zizodwa. Kwaye loo mnqweno wokuchonga ubunye bethu wamkhokelela ekugwebeni ubungqina bakhe obukhoyo. IMacLean ifanele ukuba iqwalasele ezinye ii-hypotheses, ezinokubakho njengomahluko phakathi kobuchopho bethu kunye nezo zezinye ivertebrates yinto yomgangatho, kunokuba inobubele. Kwaye kufanele ukuba ubuze ukuba ngaba ezi ndlela zimbi zinokuchaza ubungqina bakhe kanye njengombono wakhe. Olu hlobo lokuzibuza lubalulekile ekwenzeni isayensi elungileyo: kufuneka sisebenze ngakumbi ukuzama ukubonisa ukuba siphosakele. Ngethamsanqa, inzululwazi yenziwe ngendlela yokuba ukuba asikwazi (okanye ukungazi) ukuzibonakalisa ngathi siyaphambana, abo sebenza nabo ngokuqinisekileyo baya kwenjenjalo. Kwaye ezinye izazinzulu zangqina iMacLean iphosakele, njengoko icacisiwe kakuhle kwiphepha leTerrence Deacon kwinto eyaziwayo malunga nokuzivelela kobuchopho be-mammalian.
Kodwa ubungqina bokuba ithiyori kaMacLean ayilunganga khange ibonakale ngathi iyenza ukuba ivele kwihlabathi elincinci le-neuroscience yendalo. Kwaye ngaloo nto, ndicinga ukuba ezinye zezinto ezityholwayo zibekwe ngomnye wamagorha am, uCarl Sagan.
Ithiyori yobuchopho bobuthathu yadlala indima ephambili kumthengisi kaCarl Sagan kunye nompumelelo weBhaso likaPulitzer, iDragons yase-Eden. Kwi-Dragons yase-Edeni, uSagan watsalela ithiyori yeMacLean ukuze aphendule ngendlela abantu abavela ngayo ukuba bavelise isayensi, ubugcisa, izibalo kunye netekhnoloji - iimpawu zengqondo yethu, ngamanye amagama, ezisenza sahluke. Ngaphantsi kwe-neocortex yethu yokucinga, uSagan ubhale, lulwandle lweemvakalelo zakwangoko zakudala kunye nolwaziso olukhulu ngakumbi lokuphinda lubekho kulawulo lobukhosi nakwimpambano. Kodwa, wathi, abantu babalulekile kuba i-neocortex yethu iphuhliswe kakuhle, kwaye ke, ngokungafaniyo nezinye izilwanyana, sinokuqiqa indlela yethu yokuphuma kwimvelo. " -Daniel Toke
UDavid Icke yitopist elawulwa yingqondo ye-Tavistock edlala nge-MIND YAKHO, kanye njengoko ndathetha kwividiyo yam ngobunye ubusuku abantu abaninzi ababeyixabisa kwaye uninzi lwabo beluphosa imitya yengqondo emva kwam.
Inyaniso inokuba yinto encinci ebusweni kodwa iya kukhulula ukwaziwa ❤️
10 Aprili 2020 kwi-23: 15
Kwimbonakalo yakhe yokuqala yoluntu njenge "ukuvuswa" kwi-BBC (Tavistock), ewe, uqala ingxoxo yakhe malunga nemibala kunye nefuthe elinalo kwingqondo yomntu. Umnini ungqina ukuba unolwazi ngeendlela zeTavistock NLP:
11 Aprili 2020 kwi-10: 35
URobert Jensen, kwividiyo yakhe yamva nje (ngo-Epreli-10, 2020) akakwazi kubuso bakhe ... lonto ihlala iluphawu lokuba uziva ubanjiwe. Ewe, Robert, ubanjiwe.
Kuyingozi nasebusweni nasempumlweni yakho ngale coronavirus .. kungekudala intsholongwane eyoyikekayo isaya kungena kwimpumlo yakho Robert! 😉
Ngapha koko: UJensen uthi uthumele le vidiyo eqongeni lakhe kuba i-YouTube iyasusa izinto. Ngexesha elifanayo uthi akunandaba ukuba ubeka izinto kwindawo yakhe, kuba i-YouTube isenokuyijonga loo nto (ukuba sele uthethile enye into) njengesizathu sokukulahla ngokupheleleyo.
Kodwa kutheni enokuthi ayithumele ividiyo yakhe (eyokugqibela ayibeka kwiwebhusayithi yakhe) kwiVimeo (jonga ukuba yeyiphi ilogo oyibonayo xa ividiyo iphelile). UVimeo yena uyinkwenkwe enkulu. I-White House, umzekelo, ibeka iividiyo zayo kweli qonga.
Ngokwenjenje uyaziphikisa kwimigca eliqela kwaye ubonakalisa ukuba yipawn elawulwayo. Kodwa kuya kufuneka uphumelele.
Bonke abafana abavela kwiklabhu enkulu basebenza kunye ukukukhokela kwiminatha yabo yokhuseleko.
13 Aprili 2020 kwi-09: 20
Uyifumana njani i-5G enje ngomlilo? Kuya kufuneka ukuba uqeshise ngeplanethi ye-eriyali kunye nokuncamathela kwimichiza yesodium kwaye ubeke iqonga le-a emoyeni ngasecaleni kwaye utshize amanzi kuyo. Isodium ityibilika emanzini. Ipetrol ayisebenzi, kuba iyadakasa. Intsimbi ayisebenzi. Kuthekani ngentambo? Nobuqili. Ndicinga ukuba azikho ii-5G iimts, kodwa ezindala 3G iimasti, kodwa ukuba ecaleni. Ndenze i-sketch yevidiyo kwifowuni yam malunga nendlela wena kaRhulumente onokuthi uqiniseke ngayo ukuba unokufumana konke ukuxhathisa ngendlela elawulwayo. Uhlala uqhubela phambili i-pawns phambili (URobert Jensen, uAlex Jones, uDavid Icke) kwaye uhlele ukuchasana okulindelekileyo ngokwakho. Ubambisa abantu abaninzi ngangokunokwenzeka kwaye ubanike ibala; Umzekelo 'umntu ocinga iyelenqe', 'kunene', 'ukholelwa ukuba izilwanyana ezirhubuluzayo zibaleka umhlaba', 'anti vaxer', 'umphikisi wemozulu' okanye 'u-anti 5G'.
Makhe ndicace: I-5G iyingozi, kodwa ayikunikeli iimpawu zekorona. I-5G iyingozi kuphela kuba inikezela yonke i-bandwidth 'ye-intanethi yezinto', esiba yinto eyi-1 kuyo. Ukumelana ne-5G ngoko kusekwe ngabom kwiimpikiswano zobuxoki. Njengombuso wenza ukuzimela ngokwakho ngokwamalungu e-IMB (Inoffizieller Mitarbeiter). Bayakuvumela ukuba ukhwaze kwaye ukhwaza kwimithombo yeendaba zentlalo kwaye uzuze inkxaso eninzi kumkhosi weendaba wezentlalo amashumi amawaka abantu be-IMB. Emva koko ubeka umlilo malunga nokutsala kwaye unike ingqalelo kakhulu yemidiya kwaye uqhume yonke intshukumo. Amalungu e-IMB, amajoni eendaba ezentlalo, bawenzile umsebenzi wabo. I-kosje yabo sele ithengiwe ngaphakathi kwengcwele entsha yobukomanisi (i-fascist) yengcwele.
Ngaba ulilungu lomkhosi we-IMB? Kwi-GDR yangaphambili, umntu om-1 kwaba-50 wayelilungu le-IMB (uAngela Merkel nawuphi na umzimba?) Ngaba ungumkreqi olilungu lomkhosi wezosasazo loluntu? Ke awukwabelani ngale nto okanye uyabelana ngayo kwaye wongeza ukuba uMartin Vrijland ngumhlanya njalo njalo ... ngo-40/45 sababiza ngamalungu e-NSB. Amalungu e-IMB amalungu eNSB amatsha.
13 Aprili 2020 kwi-10: 24
Imaski ezi-3G ezindala (eziye zingafuneki kwakhona) mhlawumbi? Kwenzeka njani ukuba intle njengombani?
13 Aprili 2020 kwi-10: 47
U-Ashley Aurora “Sithethe ngaphambili malunga nendlela i-DARPA eyenze ngayo into ebizwa ngokuba yi-Self Organising Intelligence.
Izinto ezisisiseko ze-SOCI kukuba uhlobo oluthile lomtsalane luyakwazi ukufumana ingqalelo kunye namandla eqela elithile labantu. Ihlala iyinto engaqondakaliyo kakhulu kwaye engabonakaliyo; umbono okanye umbono othile ocacisa kuphela iqela elincinci labantu.
Xa abo bantu besebenzisa ingqalelo yabo kunye namandla kwi-SOCI, kuyenza ibe yeyokwenyani, kube lula ukuba abantu abaninzi bayiqonde kwaye bafumane umdla kwaye ibalulekile. Iya kuthi ibe nomtsalane ngakumbi kubantu abaninzi kwaye ingqalelo yabo kunye namandla.
Oku kudale oko kubizwa ngokuba lilo lokuvelisa.
Njengoko i-SOCI iba yinyani ngakumbi kwaye itsala abantu abaninzi iyaqala ukuhlangana nemingeni.
Ukuba i-SOCI inesikhundla esaneleyo kubukrelekrele bayo bokudibana ukusombulula umngeni, "inyusa amanqanaba" kwaye yandise amandla ayo okutsala umdla kunye namandla avela kubantu abaninzi.
Ezi "zinto zokuzilungiselela ezidibeneyo zokuqonda", luhlobo olutsha lwenkcubeko yenkcubeko eqala ukuphuma kwi-niche eyenziwe yi-Intanethi. Babandakanya imisebenzi enomtsalane yejenerali eyehla kwingqondo yeengqokelela eqokelela ingqalelo, sebenzisa loo ngqwalaselo ukwakha umthamo ongaphezulu kwaye ke ikhule ibe yinto eqhubayo ngokwenyani kunye nokuzilungiselela.
Idityaniswa ngamawaka ezigidi zemisonto "yeyona inokuba yinyani" kunye ne "yintoni enokuba yinyani" eqokelelwe kwi-Intanethi kwaye izama kancinci ukuyiluka ukuze ibe lilaphu elingqinelanayo, elidibeneyo kunye nelicocekileyo.
Konke oku kuhamba kwi-intanethi ngesantya sokucinga.
Kancinci kancinci kwaye ngabom, ingqalelo ye-SOCI iqala ukujongisa kwezona ntlobo zehlabathi zigqibeleleyo nezibandakanyayo kunye nezo zingasasebenziyo ezingakwaziyo ukugcina ukungqinelana kunye neminye imodeli yehlabathi okanye ii-chunks ezinkulu "zeenyani."
Oku kungalawulwa ngabadlali abangalunganga okanye abo banqwenela ukusebenzisa umsebenzi wengqondo weemngxunya ukunyanzela izinto ezinjengokubhengeza ukuthengisa kunye nokutshixeka kwesininzi.
Ngaba unomdla wokubuza ukuba kutheni abantu bebethenga iirowu nee rolls zamaphepha endlu yangasese? Le ndlela yokuziphatha ibinomdla wokwazi- kwaye inokuba neenkcazo ngokwasemphefumlweni zokuba kutheni.
Nangona kunjalo, singacacisa ukuba i-intanethi yayinento yokwenza nayo.
Kukho into esemthethweni kuyo yonke le nto kwaye ngelixa inokuvakala ngathi iyaphambana ukuyivelisa, kuya kufuneka kuthiwe kubonakala ngathi kukho 'intsholongwane yeengqondo' eyenziweyo kwaye le ntsholongwane iyasebenza Isixhobo sengqondo esiziphindaphindayo kwaye ekugqibeleni sibona 'isiphumo se -copcat' esihlasela uloyiko ebantwini kwaye izibonelelo kwabo basemagunyeni abanqwenela ukusebenzisa ezi ndlela zokuziphatha njengezizathu zokunciphisa amalungelo oluntu kunye nokwenza lukhuni ukusonjululwa kophando .
Uninzi lwabantu xa usenza izigqibo bahlala becinga ukuba into ethandwayo ilungile- yintoni esebenzela omnye umntu ekufuneka ekusebenzele kwaye xa uxelelwa ukuba amaqela athile abantu enza ngendlela ethile kwaye ukuze ubekhona kufuneka wenze oko abanye kwiqela Yenza, emva koko sifumanisa sichaza ngengcingane yeqela elithile.
Ukulandela isihlwele kusivumela ukuba sisebenze kwindawo enzima. Uninzi lwethu alunalo ixesha lokunyusa ulwazi lwethu ngayo yonke into ethengiswayo kwaye siphande ngayo yonke into ebhengeziweyo ukulinganisa ukulunga kwayo. Endaweni yoko, sixhomekeke kwimiqondiso efana nokuthandwa. Ukuba wonke umntu uthenga into, ukuqiqa kuyahamba, kukho ithuba elifanelekileyo lokuba into leyo ifune ingqalelo yethu.
Abantu bayalawulwa kwaye basebenzise amaxesha amaninzi kunokuba beqonda kwaye ngetekhnoloji entsha kunye namaqonga entlalontle, iindlela zokulawula ziba nzulu ngakumbi kwaye ngokukhawuleza uqala ukwamkela izinto owawukade ucinga ukuba ziyenyanyeka.
Yayiqhelekile ukuba esi sihlwele sicinge kwaye iintshukumo ezidityanisiweyo zazinqunyelwe kumaqela amancinci nje eluntwini - ngoku la maqela ngoku anokunyakaza kwihlabathi liphela kwimiba yeentsuku ngenxa yememoral kunye nee-hashtag.
Oku kube negalelo kwixesha lokubonisa uphawu, imfazwe yasekuhlaleni, inkcubeko evusiweyo, inkcubeko yokucima, kunye namanye amaqela aguqula ixhoba libe yimali exabisekileyo.
Ingaba kunegalelo kwindlela esenza ngayo ngoku? Ngaba kunokwenzeka ukuba isizathu sokuba i-COVID-19 iphathwe ngokwahlukileyo kungenxa yokuba into ebizwa ngokuba yi-Autonomous Superintelligence ngoku ixhokonxe oko abacebisi bezengqondo abathi yiChaos Syndrome?
I-Chaos Syndrome esikuyo inokuthi iveliswe ngobukrelekrele be-Artificial enika abantu oko bafuna ukukuva kwaye kwinkqubo iyadala uloyiko kwaye iphazamise uqoqosho.
Cinga ngenkqubo - uninzi lwabantu baseMelika bengazi malunga ne-COVID-19 saze saqala ukubona iividiyo zelizwe laseTshayina lilahla ezitratweni kwaye likhohlela igazi kwizitrato ezingaphantsi. Ezo vidiyo azange zibhengezwe kwiindaba eziphambili kuba uthungelwano lwalusiphazamisa ngenkqubo yokuNgena. Ezi vidiyo zazisenziwa kwi-intanethi ezivela kubadlali abangaziwayo. Zibuze lo mbuzo-ngoku ukuba i-COVID-19 ifike e-United States, sikhe sambona na umntu ewela esitalatweni? Ngaba kwenzeka konke oku ngaphambi kokuba sixelelwe ukuba ifikile eWashington State?
Iividiyo ekuthiwa zichithwe eTshayina. Yayingama-memes angama-hard ezisasaza intsholongwane kuyo yonke i-intanethi-njengemifanekiso yeMomo kwiividiyo zabantwana ze-YouTube.
Eli yayiliqanaba lokuqala.
Ukugqithisa kunye nokugqwetha zizixhobo ezinamandla zokukhohlisa uluntu. Kungenxa yeso sizathu le meme isebenza kakuhle kwi-intanethi.
Ithiyori ngokwayo ibuza umbuzo olula kwaye oko kukuthi, ngaba size nezimvo okanye ngaba imibono iyasilawula? "
« Inkomfa yabezindaba uMark Rutte kunye noHugo de Jonge: uluntu olunesiqingatha semitha kunye nokungeniswa kweapps
Intsholongwane izama ukosulela umzimba wonke kwaye ibiba ulwazi lweseli »
Utyelelo lulonke: 2.593.626